Goormaa La Bilaabayaa Dhismaha Dekeda Magaalada Boosaaso? | puntlandi.com
Shirkadda DP WORLD oo ah shirkad laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraatkla Carabka, ayaa dhowaan si rasmi ah u bilaabi doonta balaarinta Dekeda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxaana jiray dib-u-dhacyo horay ugu yimi shaqada ay shirkadu ka bilaabi lahayd Dekeda Boosaaso.
Warsidaha Puntlandi, ayaa ogaaday inay jiraan shaqaale horu-dhac ah oo ka tirsan shirkadda DP WOLRD, kuwaas oo gaaray magaalada Boosaaso, waxaana la filayaa in Wajiga 1-aad ee dhismaha Dekeda Boosaaso loso afmeero sida ugu dhaqsiyaha badan, xilli ay jiraan burbur meelaha qaar ku yimi, ayna Dekedu baahi wayn u qabto in balaarin lagu sameeyo.
Waxaa jira dhismayaal ay Dekedu leedahay oo ay dagan yihiin dad shacab ah, kuwaas oo laga sameeyay dhismayaal deegaan ah iyo kuwo ganacsi, waxaana sida ay noo sheegen Madxda Puntland ay doonayaan inay shacabka la kaashadaan sidii loo bannayn lahaa, isla markaana ay muhiim tahay in danta guud laga wada shaqeeyo.
Inkasta oo ay jiraan dhismayaal ay dawladu horay u bannaysay xilliyo kala duwan oo Dekeda dib-u-habayn lagu samaynayay, hadana dhismayaasha la bannayn doono, ayaa noqonaya kuwii ugu balaarnaa ee dawladu ay samayn doonto.
Shirkadda DP WORLD, ayaa horay Puntland uso gaarisiisay lacag dhan Shan Milyan oo Doolar, taasi oo ujeedadeedu ay ahayd in lagu qabto shaqooyin horu-dhac u ah dhismaha Dekeda, gaar ahaan bannaynta dhulka ay leedahay Dekeda Boosaaso, waxaana Wajiga 1-aad ee dhismaha Dekeda ku baxaya lacag dhan Laba Boqol Oo Milyan Oo Doolar.
Maxaan Ka Naqaana DP WORLD?
Shirkadda DP WORLD oo laga leeyahay wadanka Isutaga Imaaraatka Carabta, ayaa maamusha Dekedo kor u dhaafaya todobaatan, kuwaas oo ku yaala dalal ka badan Afartan wadan oo Caalamka ku yaala.
Dekedaha ay shirkaddu maamusho Qaaradda Afrika, ayaa qaarkood ay ku yaalan wadamada Masar, Jabuuti, Senegal, Al-jeeriya iyo dalal kale.
Shirkaddan ayaa ah shirkadda dhisaysa Dekeda magaalada Berbera, waxaana dhismaha Dekeda Berbera ku baxaya lacag dhan 442 Milyan oo doolar.
Dekeda magaalada Boosaaso ayaa noqon doonta Dekeda Sagaalaad ee shirkaddu ay maamuli doonto Dekeda ku yaala Qaaradda Afrika, waxaana heshiiska Dekeda Boosaaso uu socon doona muddo ku siman Soddon Sano.
Waxaa Dekeda magaalada Boosaaso la filayaa in haddii ay ka faa’iidaysato fursadan, isla markaana loo fuliyo sida loogu tala galay ay gasho tartan Ganacsi, isla markaana ay hesho fursado Miisaan leh oo Ganacsi.
Wararka ku saabsan Dekeda magaalada Boosaaso iyo Balaarinteeda kala soco Warsidaha Puntlandi.com.